Server multimedia: Mamorona iray tsotra amin'ny GNU / Linux mampiasa MiniDLNA | Avy amin'ny Linux
Linux Post Install | 19/09/2021 06:00 | fampiharana, Tutorials / Manuals / Tips
Androany, hijery ny fomba hamoronana kely isika «Multimedia Server» an-trano mampiasa teknolojia tsotra sy malaza antsoina hoe DLNA. Akademia izay mifanaraka "Digital Living Network Alliance", izay nadika tamin'ny teny espaniola "Alliance for the Networked Digital Lifestyle".
Ary noho izany dia hampiasa rindrambaiko kely sy malaza antsoina hoe terminal izahay MiniDLNA. Izay hita amin'ny ankamaroan'ny repositories an'ny GNU / Distros Linux malaza sy be mpampiasa. Ary hijerena ny atiny avy amin'ny fitaovan'ny tamba-jotra, birao finday na finday hafa, hampiasa rindrambaiko haino aman-jery fanta-daza sy be mpampiasa antsoina hoe VLC.
Ary toy ny mahazatra, alohan'ny hidirantsika tanteraka amin'ny lohahevitra androany dia hiala amin'ireo liana amin'ny fikarohana ny sasany tamin'ireo farany teo aloha isika Lahatsoratra mifandraika miaraka amin'ny lohahevitr'i Servers Multimedia y DLNA, ireto rohy manaraka ireto mankany amin'izy ireo. Mba hahafahan'izy ireo manindry haingana raha ilaina, rehefa vita ny famakiana ity publication ity:
"DLNA (Digital Living Network Alliance) dia fikambanan'ny mpamokatra elektronika sy solosaina nifanaiky hamorona karazana fenitra mifanaraka amin'ny rafitr'izy ireo. DLNA dia mamela ireo fitaovana samihafa mety ho ao anatin'ny tambajotra iray ihany hifanerasera hifampizara atiny samy hafa. Ny tombony azony omena dia ny fikirakirana mora sy ny fahaizany miovaova. Ity rafitra ity dia afaka miasa amin'ny tambajotra Wi-fi sy Ethernet." Fandefasana amin'ny Linux mampiasa DLNA
Jellyfin: Inona ity rafitra ity ary ahoana no hametrahana azy amin'ny fampiasana Docker?
1 Mpizara Multimedia: MiniDLNA + VLC
1.1 Inona no atao hoe mpizara media?
1.2 Inona ny MiniDLNA?
1.3 Ahoana ny fametrahana sy fikirakirana MiniDLNA?
1.4 Tantano ny atiny DLNA / UPnP-AV miaraka amin'ny VLC amin'ny Android
Mpizara Multimedia: MiniDLNA + VLC
Inona no atao hoe mpizara media?
Un «Multimedia Server» tsy inona izany fa ny tambajotram-pifandraisana izay itehirizana rakitra multimedia. Ity fitaovana ity dia mety ho avy amin'ny Server mahery na desktop tsotra na solosaina findainy. Izy io koa dia mety ho mpamily NAS (Network Storage Drives) na fitaovana fitehirizana hafa mifanaraka aminy.
Zava-dehibe ny mitadidy ao an-tsaina fa ho an'ny a Fitaovana filalaovana afaka mifandray amin'ny a «Multimedia Server», tokony ho mifanaraka amin'ny iray amin'ireo fenitra roa misy izy io.
Ny iray dia DLNA, izay miantoka fa afaka mifampiresaka sy mizara atiny multimedia ireo fitaovan'ny tambajotra an-trano. Ary ny iray hafa dia UPnP (Universal Plug and Play), izay vahaolana iraisana iraisana kokoa eo amin'ny mpizara haino aman-jery sy ny fitaovana playback mifanentana. Ary koa, ny DLNA dia fitomboan'ny UPnP ary mora kokoa sy mora ampiasaina kokoa.
Inona ny MiniDLNA?
Araka ny hevitry ny Tranonkala MiniDLNA, hoy ity fampiharana ity:
"MiniDLNA (fantatra ankehitriny amin'ny anarana hoe ReadyMedia) dia rindrambaiko mpizara haino aman-jery tsotra, izay mikendry ny hifanaraka tanteraka amin'ireo mpanjifa DLNA / UPnP-AV efa misy. Tamin'ny voalohany dia novokarin'ny mpiasa NETGEAR iray ho an'ny tsipika vokatra ReadyNAS.
Ahoana ny fametrahana sy fikirakirana MiniDLNA?
Ny fonosana misy MiniDLNA antsoina amin'ny toerana fitehirizana rehetra "Minidlna", noho izany, safidio fotsiny ary ampiasao ny Mpitantana fonosana GUI / CLI aleony mametraka sy mamela azy io toy ny mahazatra. Ohatra:
Raha vao apetraka dia ireto manaraka ireto ihany no tokony hatao baiko baiko ary fanovana kely ao aminao fisie fisie ary mihazakazaka avy eo ka misy Solosaina miaraka amin'ny GNU / Linux lasa kely sy tsotra «Multimedia Server»:
Ataovy ireto fanovana manaraka ireto. Raha ny momba ahy dia nanao ireto aho:
Manendre lahatahiry / làlan'ny atiny media
Alefaso ny làlan'ny fitahirizana data DLNA
Alefaso ny làlan'ny lahatahiry hazo
Validate / Enable port natokana ho an'ny protokol DLNA
Mametraha anarana DLNA Media Server
Alefaso ny fahitana automativa ireo fisie vaovao amin'ny làlana / lahatahiry atiny media
Ampifanaraho ny elanelan'ny fampandrenesana SSDP, segondra
Tehirizo ny fanovana ary avereno ny MiniDLNA Media Server
Hamarino eo an-toerana ny fiasan'ny Multimedia Server miaraka amina tranokala amin'ny Internet mampiasa ny URL
Izao dia mijanona ihany, mandika rakitra multimedia amin'ny zotra / lahatahiry voalamina. Ary raha nandeha tsara ny zava-drehetra, dia ho hita eo an-toerana izy ireo amin'ny alàlan'ny fampifanarahana amin'ny tranokala ampiasaina.
Tantano ny atiny DLNA / UPnP-AV miaraka amin'ny VLC amin'ny Android
Manomboka izao, ohatra, amin'ny a Fitaovana finday Android ary mihazakazaka ny Fampiharana VLC, haseho izy io aorian'ny segondra vitsy ao amin'ilay faritra antsoina "Tambajotra eo an-toerana" ny anaran'ny anay «Multimedia Server». Ary azontsika atao ny mijery ireo zotra / lahatahiry voalamina ary milalao ny atiny multimedia natolotra.
Raha fintinina, ampiasao ny Teknolojia DLNA / UPnP-AV amin'ny alàlan'ny fampiharana MiniDLNA hanangana tsotra sy ilaina «Multimedia Server» ny trano dia safidy tsara indrindra hidirana mora foana sy hankafizana araka izay azo atao atiny multimedia fananantsika. Izany hoe, ao amin'ny arisitr'i audios / feo, horonan-tsary / sarimihetsika ary sary / sary izay azontsika atao amin'ny solosaina an-trano na birao tsotra hizarana amin'ny hafa maimaimpoana ary tsy misy fandrefesana na fanamafisana lehibe na sarotra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Server multimedia: Mamorona iray tsotra amin'ny GNU / Linux mampiasa MiniDLNA